ပဲမွဈမွပေဲကပျလေး စားကွမယျ - Knowledgeworms
January 5, 2021 January 5, 2021 AuroraLeaveaComment on ပဲမွဈမွပေဲကပျလေး စားကွမယျ
ပါဝငျပစ်စညျးမြား -အားလုံးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးပါပဲနျော။
ပထမဆုံး ပဲမွဈတှရေဆေေးပွီး ၄၅မိနဈခနျ့ပွုတျပါ။ ပွုတျထားတဲ့ပဲမွဈတှကေိုထောငျးထားပါ။မွပေဲနှငျ့ဆားကိုရောထောငျးပါ။ ထောငျးထားသောပဲမွဈမြားကို တဈကိုကျစာအဝိုငျးလေးမြားပွုလုပျပွီး မွပေဲဆားထောငျးဖွူးပါ။ ဆီဆမျးပွီးလြှငျ အရသာရှိတဲ့ ရာသီစာ ပဲမွဈမွပေဲကပျလေးရပါပွီ။
(မှတျခကျြ!!!အဓိက ပွောခငျြတာလေးတဈခုရှိပါတယျ။ ကမြတို့ မွနျမာလူမြိုးတှဟော အခြိုအရမျးကိုကွိုကျကွပါတယျ။ ပဲမွဈမှာသဘာဝအခြိုဓာတျပါပွီးသားကိုမှ ထနျးလြှကျတှထေညျ့ပွုတျတကျကွပါသေးတယျ။ သကွား ထနျးလြှကျစသဖွငျ့ အခြိုဓာတျဟာ ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှကေို ကငျဆာဆဲလျ တှေ ပိုတိုးလာစပေါတယျ။ ကငျဆာဝဒေနာရှငျမဟုတျတဲ့ ကနျြးမာနတေဲ့လူတှအေတှကျလဲ အခြိုဓာတျဟာ စားတိုငျးမကောငျးပါဘူး။ မွနျမာ့ရိုးရာစာ မုနျ့ဆီကွျော မုနျ့လကျကောကျ စတဲ့အစားစာတှမှော ထနျးလြှကျက မဖွဈမနထေညျ့ရတာမို့ ပဲမွဈလိုသဘာဝအခြိုဓာတျရှိပွီးသား အစားစာတှမှော ထနျးလြှကျထညျ့ပွုတျတာမြိုးကို ရှောငျကဉျြကွစခေငျြပါတယျနျော)
ပထမဆုံး ပဲမြစ်တွေရေဆေးပြီး ၄၅မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ.ပြုတ်ထားတဲ့ပဲမြစ်တွေကိုထောင်းထားပါ.မြေပဲနှင့်ဆားကိုရောထောင်းပါ.ထောင်းထားသောပဲမြစ်များကို တစ်ကိုက်စာအဝိုင်းလေးများပြုလုပ်ပြီး မြေပဲဆားထောင်းဖြူးပါ.ဆီဆမ်းပြီးလျှင် အရသာရှိတဲ့ ရာသီစာ ပဲမြစ်မြေပဲကပ်လေးရပါပြီ.
(မှတ်ချက်!!!အဓိက ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်.ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အချိုအရမ်းကိုကြိုက်ကြပါတယ်.ပဲမြစ်မှာသဘာဝအချိုဓာတ်ပါပြီးသားကိုမှ ထန်းလျှက်တွေထည့်ပြုတ်တက်ကြပါသေးတယ်.သကြား ထန်းလျှက်စသဖြင့် အချိုဓာတ်ဟာ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေကို ကင်ဆာဆဲလ် တွေ ပိုတိုးလာစေပါတယ်.ကင်ဆာဝေဒနာရှင်မဟုတ်တဲ့ ကျန်းမာနေတဲ့လူတွေအတွက်လဲ အချိုဓာတ်ဟာ စားတိုင်းမကောင်းပါဘူး.မြန်မာ့ရိုးရာစာ မုန့်ဆီကြော် မုန့်လက်ကောက် စတဲ့အစားစာတွေမှာ ထန်းလျှက်က မဖြစ်မနေထည့်ရတာမို့ ပဲမြစ်လိုသဘာဝအချိုဓာတ်ရှိပြီးသား အစားစာတွေမှာ ထန်းလျှက်ထည့်ပြုတ်တာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ကြစေချင်ပါတယ်နော်)
March 17, 2021 March 17, 2021 Aurora